चेन गेटभित्र चिकित्सक, बाहिर बिरामी, नर्सलाई रेनकोट | Nepal123.com
Posted in कोसी अस्पताल, प्रदेश १, प्रमुख समाचार
चेन गेटभित्र चिकित्सक, बाहिर बिरामी, नर्सलाई रेनकोट
Author: Rabindra Ghimire Published Date: March 26, 2020 LeaveaComment on चेन गेटभित्र चिकित्सक, बाहिर बिरामी, नर्सलाई रेनकोट
१३ चैत, बिराटनगर । कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएपछि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाएको बताउँदै आएको छ । कोरोना जोखिमका कारण देश मंगलबार यता लकडाउन भएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षाको उचित प्रवन्ध गर्न नसक्दा कोरोनाविरुद्ध लड्ने टोलीको फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु आफैं असुरक्षित छन् ।
कोरोना संक्रमित र आशंकामा उपचारका लागि आउने विरामीको जाँचका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी मनोबैज्ञानिक त्राससँगै जोखिममा छन् ।
बुधबार दिउँसो कोसी अस्पतालको इमरजेन्सी वार्डमा ६ स्वास्थ्यकर्मी थिए । दैनिक दुईहजार हाराहारी बिरामीको आउजाउ हुने कोसी अस्पताल सुनसान थियो । पाइला राख्ने ठाउँ नपाइने इमरजेन्सी वार्डका बेडहरु खाली थिए ।
इमरजेन्सी वार्ड प्रवेशद्धार बन्द थियो । भित्र रहेका ६ जना स्वास्थ्यकर्मी ‘हाइअलर्टमा’ थिए । अस्पतालमा विरामी नभए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु भने फुर्सदमा थिएनन् । सतर्कता सामाग्रीले अनुहार ढाक्ने कोसिस गरेका उनीहरुको चिन्ता र तनाव आँखामा प्रष्ट झल्किन्थ्यो ।
सुनसान अस्पतालको इमरजेन्सी अगाडि एउटा एम्बुलेन्स आयो । एउटा रोकिन नपाउँदै अर्काे एम्बुलेन्स पनि इमरजेन्सी अगाडि रोकियो ।
सामान्य सतर्कता अपनाएका व्यक्तिले इमरजेन्सीमा छिर्ने बैकल्पिक ढोका बन्द गरे । च्यानल गेटबाट एम्बुलेन्स चालकलाई सोधे ‘कस्तो बिरामी ? एम्बुलेन्स चालकले ‘कोरोना आशंकामा पठाएको बिरामी’ भने ।
रतुवामाई नगरपालिकाबाट बिरामी लिएर आएको बताएका चालकले मास्क बाहेक अन्य सुरक्षाका सामग्री लगाएका थिएनन् । एम्बुलेन्सको पछाडिबाट ओर्लिएका एकजना पुरुषले कागज देखाउँदै भने, ‘रतुवामाई नगरपालिकाबाट आएको ।’
सुरक्षाका लागि पानी पर्दा ओड्ने रेनकोट लगाएकी स्वस्थ्यकर्मीले स्लिप समातिन् ।
एम्बुलेन्समा युवक थिए, जो भारतको चेन्नेइबाट आएका ती युवकलाई बान्तासँगै जोरो पनि आएपछि स्थानीयले &#2
Tagged कोसी अस्पताल, प्रदेश १, प्रमुख समाचार
← कहाँ पुग्यो कोरोना भाइरसविरुद्ध औषधिको अनुसन्धान ?
विद्युत महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने तयारी →